1 months ago 8 တစ်နှစ် #1099 by Scotia
ငါအာဖရိကမှလာမယ့်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိ FSX ကို set up နှင့်မှန်မှန်အာဖရိကခရီးစဉ်တွေပျံသန်း, တခါတရံတွင်အနိမ့်အဆင့်, တစ်ခါတစ်ရံအလင်းလေယာဉ်ပျံ၌တည်၏။ သငျသညျရိုင်းနှင့်ပြည်တွင်းတိရိစ္ဆာန်များတွေ့မှငါ့ကိုကို enable မယ်လို့ထားတဲ့ prog ဒီဇိုင်းနိုင်မဆိုလမ်းလည်းမရှိ ကျေးဇူးပြု. ? ယခုတွင်ငါသည်ခဏတစ်ဘို့ဤကျော်စားတတ်သောပြီ, ဤပေါ်တွင်သင်၏အမြင်များကိုနားထောငျဖို့အလွန်စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအံ့သြဖွယ်သော Rikooo ကနေ install လုပ်ပြီးသားအချို့အခြားအ Rikooo addons ရှိသည်, အရာအဘို့ငါပျူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: RichardSteyn: D:
1 months ago 8 တစ်နှစ် - 1 months ago 8 တစ်နှစ် #1102 by rikoooo
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါသည်အသင်ဤရှုခင်းကြည့်ရှိစေခြင်းငှါထင်: www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/68/762
ဒါဟာအချို့အာဖရိကန်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် add ပါလိမ့်မယ် FSX.
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်: 1 တစ်နှစ် 8 months ago နေဖြင့် rikoooo.